Ukuphupha ngeBayer Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neBayer
Nokuba asingawo amaBavaria, kuba sivela kwelinye ilizwe laseburhulumenteni okanye siphuma phesheya, sinokuphupha ngomhlali waseburhulumenteni oneflegi yedayimane eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Mhlawumbi sithetha nomntu waseBavaria oyinyaniso ngamava ephupha, amava kuye ngesinxibo sendabuko, okanye ngokulula nje sazi kwindawo esingaziwayo ukuba ephupheni kufuneka sikwilizwe laseBavaria.
Ukuba uphawu lwephupha elithi "Bayer" luyavela, ezinye iisimboli zihlala zingumxholo wephupha. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo xa kutolikwa umfanekiso wephupha, njengokuculwa kwe-yodel. Inqaku elilandelayo liza kukunceda ubuqonde obu budlelwane.
1 Uphawu lwephupha «Bayer» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Bayer» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Bayer» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Bayer» - ukutolikwa ngokubanzi
I-Bavarian incarnates njengomqondiso wephupha Imilinganiselo yesiko kunye nonxibelelwano olomeleleyo kwinkcubeko yaseBavaria. Ngokukodwa ukuba umntu waseBavaria ngokwakhe uphupha ngaye kunye namaphupha omntu wasekhaya, kubonisa indlela azimisele ngayo kuluntu lwaseJamani.
Ngokunxulumene nomfanekiso wephupha wase "Bayer", ezinye izinto ezibalulekileyo ezinokubonakala ephupheni ezinxulumene ngokusondeleyo neBavaria kunye nabemi bayo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kufanelekile ukuba sikhankanye apha iOktoberfest, apho kuhlala kukho imibhiyozo emininzi kwaye apho kunxila khona iilitha ezininzi zebhiya. Ukusuka koku, kwelinye icala, uthetha ngokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha. Yonwabela ubomi yokuphupha.
Kwelinye icala, iBavaria ikwalumkisa ngokuchasene nobomi obugqithisileyo e-Oktoberfest. Ukuba umlinganiso webhiya okanye ezimbini okanye ezintathu zongezwa, ezinxilileyo ephupheni, oku kunokuba ngumqondiso kumntu ophuphayo ukuba azi indlela aphila ngayo kwaye abekelwe bucala kwezinye iindawo.
Ukuba uva umntu waseBavaria ethetha isiBavaria ephupheni, oku kungasondela ekuphupheni. Utshintsho Iingoma. Ngokukodwa ukuba akangowaseBavaria ngokwakhe, la mava ephupha abhengeza umnqweno wokuqala into entsha ebomini bakhe.
Ukuba, njengomntu ongengowaseBavaria, umntu unxibe iimpahla zesintu ephupheni, oku kukwabonisa isidingo sokwenza unxibelelwano olutsha kwezentlalo ukuze ulunge kuluntu olutsha.
Uphawu lwephupha «Bayer» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuphupha isimboli yamaphupha "iBayer" inokubonisa imiba eyahlukeneyo ngokwembono yengqondo. Ngale ndlela, iphupha labantu abaninzi ababandakanyekayo libonisa oku ingqondo engxamisekileyo kwaye kwangaxeshanye luphawu lwezakhono zabo zentlalo. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwindlela ajonga ngayo umBavaria, ukwalumkisa umphuphi ukuba alawule ngcono iimvakalelo zakhe.
Kodwa ubomi bokonwaba eBavaria bunokubudinisa kakhulu. Ke ngoko, into ethatha isigqibo kutoliko lomntu ngamnye yindlela oziva ngayo ngexesha lokuphupha kunye nendlela oziva ngayo imeko yephupha ngokweemvakalelo.
Ukuba uqaphela ukuba ummi waseBavaria ungxola kwaye uyadinisa, oku kubonisa ukuba kufuneka itoliki. Uxolo y ukurhoxa. Nangona kunjalo, kuba amaBavaria asondele kakhulu kwindalo, indawo esemazantsi eJamani inokuba yindawo efanelekileyo yokuphumla.
Uphawu lwephupha «Bayer» - ukutolika kokomoya
Kuhlalutyo lwephupha lokomoya, iBavaria ifanekisela ukubaluleka njengomfanekiso wephupha. Imilinganiselo yesiko kubomi bamaphupha.
Iphupha malunga nokubola